Taariikhda Koobka Adduunka oo Kooban…(QEYBTA TODOBAAD)+SAWIRRO - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Taariikhda Koobka Adduunka oo Kooban…(QEYBTA TODOBAAD)+SAWIRRO
May 16, 2018 at 10:56 Taariikhda Koobka Adduunka oo Kooban…(QEYBTA TODOBAAD)+SAWIRRO2018-05-16T10:56:32+00:00 CAYAARAHA
( World Cup ) 16 Maajo 2018. Dhacadada ugu wayn kubbada cagta adduunka ee “World Cup” ama Koobka Addunnka ayaa waxaa ka harsan 29-maalmood oo qura, GoolFM.net ayaa go’aansatay inay idin soo gudbiso Taariikhda koobka adduunka oo Kooban tan iyo markii uu soo bilowday ilaa iminka. 1930-kii ilaa 2014.
20-jeer ayaa la qabtay ciyaaraha koobka adduunka waxaadna maalin dhaaf u heli doontaan taariikh kasta oo ciyaaraha Adduunka ah.
Waxaan maanta idiin soo gudbineynaa taariikhda koobka adduunka 1962-kii oo kooban.
Sanadkii 1962 waa markii todobaad ee la qabtay ciyaaraha koobka adduunka. Waxaana marti galisay dalka Chile intii u dhaxeysay 30 May ilaa 17 June ee sanadkaas 1962 in Chile.
Kooxaha kasoo qeyb galay isreeb-reebka koobka adduunka ayaa xiligaas ahaayeen 57 dalka kuwaas oo ka kala socday lix qaaradood ee caalamka, iyadoo ay bilaabmeen kulamad isreeb-reeb bishii August sanadkii 1960.
Afar iyo toban xul ayaa kasoo baxay isreeb-reebka ciyaaraha aduunka, oo ay qeyb kala noqonayaan marti galiyaasha Chile iyo difaacayaasha Brazil.
Tartanaka koobka adduunka waxaa xiligaas ku guuleystay xulkii difaacanay ee Brazil, waana koobkoodii labaad ee ciyaaraha aduunka kadib markii ay 3-1 kaga adkaadeen dalkii la horan jiray Czechoslovakia kulan ka dhacay caasimada Chile ee Santiago, waxaana Brazil ay noqotay kadib xulkii Italy oo difaacday koobka adduunka 1938 dalkii labaad ee isna difaaca waana ilaa hadda labada xul ee koobka adduunka difaacay.
Marti galiyaasha Chile ayaa Kaalinta Seddaxaad tartanka ka galay iyadoo garaacay xulkii la oran jiray Yugoslavia.
Tartankii ciyaaraha adduunka ee 1992-dii waxaa saameyay jawi sumeed iyo rabasho ku dhex maray ciyaartoyda gudaha garoonka oo ay kamid aheyd rabshadii caanka ee wareega koowaad ee ciyaara dhexmartay cayaartoyda xulalka Chile iyo Italy kualan ay chile 2-0 ku badisay, waxuuna la magac baxay kulankaas dagaalkii Santiago, wuxuuna ahaa mid kamid ah kulamadii rabshada lagu ciyaaray iyadoo socoto cayaarta.
Waxeey aheyd markii ugu horeysay ee ciyaaraha koobka adduunka la isticmaalo goolka faa’iidada kaasoo lagu kala saarayo xulalka dhibcaha kawada siman.
DAAWO SAWIRRADA KOOBKII ADDUUNKA 1962
« Florentino Perez oo looga digay saxiixa Neymar (Ogoow sababta)
IMF Staff Completes Review Visit and Reaches Staff-Level Agreement on a Third Staff-Monitored Program with Somalia »